‘भ्यू टावर र मूर्ति बनाउने बजेटले कर्णालीमा बिजुली बालौं’ – Dullu Khabar
‘भ्यू टावर र मूर्ति बनाउने बजेटले कर्णालीमा बिजुली बालौं’
२९ बैशाख २०७७, सोमबार १३:३७
काठमाडौं । जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले भ्यू टावर बनाउने बजेट कर्णालीमा विद्युत् पुर्‍याउन लगाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद महतले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका हुन्। ‘
बजेट घाटा छ भन्‍ने थाहा छ हामीलाई। अबका बजेटहरु भ्यू टावरमा जान भएन। त्यो मूर्ति बनाउने ठाउँमा जानु भएन। पार्कमा जान भएन। जहाँ प्राथमिकता छ त्यहाँ जानुपर्‍यो।
हाम्रा लागि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना, महाराष्ट्रिय गौरवको योजना भनेको पनि त्यही बत्ती हो’, उनले भने, ‘त्यही एउटा बैकल्पिक बाटो हो। ऊर्जाको पहुँचबाट कोही टाढा रहने छैन। विद्युतको पहुँच हुनेछ भनियो। अहिले पनि जुम्ला विद्युतको पहुँचबाट टाढा छ। त्यो त अकाशको फल जस्तो भइसक्यो।’
सांसद महतले कर्णालीको हुम्लामा अझै मोटर बाटो नपुगेको गुनासो गरे। ‘कर्णालीका सबै जिल्लामा अझै मोटर बाटो पुगेको छैन’, उनले भने, ‘बाटो कहिले पुग्ने हो थाहा छैन। सामान्य बाटो र बत्ती पुग्नलाई गाह्रो अरु के प्राथमिकतामा राख्ने?’ उनले बजेटको असमान वितरणप्रति आपत्ती जनाए।
जुम्लामा सडक र बिजुली पुर्‍याउने विषयले हरेक वर्ष प्राथमिकता पाएपनि अहिलेसम्म उक्त योजना अलपत्र रहेको बताए। उनले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे।
‘५ वर्ष आउन लागिसक्यो। मैले ५ वर्षमा २ वटा मात्रै कुरा राखेको छु बत्ती र सडक पुर्‍याउँछु भनेर। नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि पर्यो तर अहिलेसम्म बत्तीको ठेगान छैन’, उनले अगाडि भने, ‘अब अर्को चुनावमा म कसरी जाने हो? जनता आगाडी कसरी जाने मलाई त गाह्रो भइसक्यो। पैसा कम गएकोमा चिन्ता छैन।
असमान वितरणमा चिन्ता हो। यति कराउँदा पनि गाह्रो छ भने कर्णाली कसरी उँभो लाग्दो हो? कसरी जुम्ला उँभो लाग्दो हो। निन्द्रा पनि लाग्दैन।’ लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी कर्णाली थला परेको भन्दै उनले कोरोनासंग लड्नका लागि लकडाउनको विकल्पमा बहस गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
‘लकडाउनले ठूलो राहत दिएको महसुस तपाईंहरुले गरिरहनुभएको छ हामीले थला परेको महसुस गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कोरोनाबाट लुकाएर मानवसमाजलाई राख्‍न सकिन्छ कि सकिँदैन? बहसको विषय बनाउनुहोस्। लुकाएर राख्‍न सकिँदैन। योसँग जुधेरै जानुपर्छ। लकडाउन गरेर मान्छेलाई कोरोनाबाट लुकाएर कति साध्य हुन्छ?’